New Mars Map Ezubere maka Ịgachi Ụmụ mmadụ - News Ọchịchị
New Mars Map Ezubere maka Ịgachi Ụmụ mmadụ
British nkewa gị n'ụlọnga Ordnance Survey emepụta mfe na-agụ map iji Nasa emeghe data, nke nwere ike a ga-eji mgbe na-eje ije n'elu Mars
Isiokwu a na-akpọ “New Mars map pụrụ inye ntụziaka maka a esenowo si na-eje ije red planet” e dere site Ellen Brait na New York, n'ihi na The Guardian on Tuesday 16 February 2016 18.17 UTC
The British nkewa gị n'ụlọnga Ordnance Survey kere ihe dị mfe na-agụ map nke Mars 'elu site na iji Nasa emeghe data.
The map - posted na- Flickr on Friday - ekpuchi 3.8m sq kilomita ma ọ bụ ihe dị ka 7% nke red mbara ala elu. Ọ na-emepụta na-a ọnụ ọgụgụ nke onye na-4m.
The ọdịda saịtị nke gara aga rovers na-agba na map, gụnyere Mars Pathfinder na n'ebe ugwu-n'ebe ọdịda anyanwụ Ares Vallis na Opportunity rover, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Margaritifer Na.
Cartographic mmebe Chris Wesson "e mere na map n'elu a di na nwunye nke ọnwa", dị ka Ordnance Survey blog. Ọ na-akpa odida obodo ndị gị n'ụlọnga mapped ọzọ planet.
The map na-ekpuchi 3.8m sq kilomita nke Mars 'elu. Foto: Ordnance Survey / Flickr
"Ọ bụ ntakịrị ihe ike na mbụ aka n'ezie ịghọta data onwe ya na okwu nke ihe dị ka elu na ọnụ ọgụgụ na na,"Wesson gwara BBC. "Ma n'ezie anụ ahụ usoro bụ fọrọ nke nta yiri ka ihe e ji mee ka ihe Earth map, ma ọ bụ ihe ọ bụla OS map. "
N'agbanyeghị Mars 'aha otutu na ogho uhie elu, OS amịtaghị a red map. Wesson kwuru ọ họọrọ a green na pink na agba atụmatụ n'ihi na "Earth dabeere na map-bụghị mgbe niile acha anụnụ anụnụ-acha akwụkwọ ndụ" na ọ chọrọ "na-anọchi anya data n'ụzọ OS ga-ama na anyị e nyere Earth data ike a mgbe nile map mpempe akwụkwọ na a typical oS style ".
o kwukwara: "Red bụkwa a nnọọ ọchịchị kasị agba na-adịghị nnọọ na-akwado nke thematic machite dị ka ọdịda saịtị ma ọ bụ ebe aha."
Wesson ahụ kwenyere na map dị iche karịa ndị ọzọ map nke mbara ala n'ihi na ọ na-emeso ndị Mars data ahụ dị ka "ihe ọ bụla ọzọ Earth dabeere na ala ọmụma ma ọ bụ odida obodo".
"Echere m na ọ bụ ezie na ụkpụrụ bụ otu, imewe na aesthetics nke ihe Earth map dị iche nke ukwu ọ bụla na mbara map na m na hụrụ tupu,"Ka o kwuru. "M hụrụ n'anya mbara map na-ahụ na ha anya akpali nnọọ mmasị … ma ha na-iyi ka, dị ka bụ ha pụta ụwa okike, nnọọ na nkà mmụta sayensị na-ekwekọghị n'okike na ha ngosi. "
Ordnance Survey a gwara ya ka ahọpụtakwa ndị map site British ọkà mmụta sayensị Dr Peter Grindrod na Birkbeck, University of London, dị ka BBC. Grindrod na-otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị aka n'ime atụmatụ ọdịda nke a ọhụrụ rover na Mars na 2019.
Jụrụ ya ma ọ chere na ndị mmadụ nwere ike iji ya map mgbe "na-eje ije n'elu Mars" otu ụbọchị, Wesson bụ ejighị n'aka.
"Ọ bụ a mma echiche, na otu ụbọchị ndị mmadụ pụrụ ịmata kpọmkwem odida obodo gburugburu ha si a map dị nnọọ ka na British obodo, ma map nwere ike ịbụ nnọọ iche site mgbe ahụ. "
← 4 Real efe Cars na n'ezie na Ofufe [Na] Philips SHB9850NC Ekweisi Review →